Banyere anyị - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
A raara blọgụ a maka njem na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia: kedu maka ihu igwe, ndị mmadụ, ọnụahịa na ihe kachasị mkpa - nri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Anyị ga -ahụ mgbe niile ozi kachasị mkpa na isiokwu ahụ. Ka ndị ọbịa anyị wee nwee ike ịchọta ozi ziri ezi n'ụzọ dị mfe, anyị ewepụtala ụzọ igodo pụrụ iche n'ime akụkọ ahụ wee mepụta edemede pụrụ iche iji chọta ihe kacha dịrị onye ọrụ mma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnata nchịkọta akụkọ na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike denye aha na ndepụta RSS ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ, nke na -ebipụta ihe kacha ewu ewu ebipụtara n'otu ọnwa na saịtị a.
N'ụzọ dị otu a, ị ga-enweta data ọhụụ, nke kacha ọhụrụ.
Isi ọrụ nke ọrụ anyị bụ ịnye gị, ndị na -agụ ya, ozi sara mbara, nyere iwu ka enwere ike.
Ebe nrụọrụ anyị na -elekwasị anya na ndị nkịtị na -achọ ozi na isiokwu ha nwere mmasị na ya.
Anyị na -agba mbọ ịnye ihe nke ọma nke na ị chọghị ịchọ nkọwa ebe ọzọ.
Anyị na -eto eto na -eto eto mgbe niile.
Akụ a na -ejupụta na akụkọ ọhụrụ na ndezi kwa ụbọchị, ị nwekwara ike sonye na ya.
Ị nwere ike izitere anyị aro gị, echiche na ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na ụdị nzaghachi.
Na nkwanye ùgwù, nchịkwa ọrụ.
Indonesia ọ nwere ajọ ifufe?
Bali adịghị enwe ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe. Bali bụ akụkụ nke mgbanaka Pacific
Azịza kachasị mma: Kedu nri kacha mma na Thailand?
Kedu akụkụ nke Thailand nwere nri kacha mma? Ebe kacha mma na Northern
Gịnị bụ akwụkwọ mbụ e bipụtara na Philippines?
Doctrina Christiana: Akwụkwọ Mbụ E Bipụtara na Philippines, Manila, 1593. Ọ bụ nke mbụ
Gịnị bụ aha ego Indonesian?
Kedu obodo bụ IDR? $100 ọ bụ nnukwu ego na Indonesia? Na Indonesia,
Kedu ihe ubi ndị ọrụ ugbo na-akụ na Cambodia?
Na mgbakwunye na osikapa, ihe oriri ndị ọzọ gụnyere akpu, ọka (ọka), okpete, soybean, na
Azịza ọsọ ọsọ: Kedu otu m ga-esi si Australia kpọọ Singapore?
Koodu obodo Singapore bụ 65. Maka oku na-aga Singapore si Australia pịa: 0011 +
Ajụjụ: Ndị Thai nwere ike ịga Korea?
Azịza ngwa ngwa: Ebee ka m nwere ike igwu egwu na agụ na Thailand?
Azịza kacha mma: A ka machibidoro ịta chịngọm na Singapore?
Azịza ngwa ngwa: Thailand ọ bụ obodo Buddhist?
Vietnam ọ nọ na UN?
Ajụjụ na-adịkarị: Philippine cobra ọ na-egbu egbu?
Bali na Thailand ọ bụ otu obodo?